Hubi nidaamyada Mac ee galaya internetka iyada oo loo marayo terminal | Waxaan ka imid mac
Waxaa jira siyaabo badan oo loo fiiriyo hababka qaarkood ee Mac -ku sameeyo, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan ayaa ah adeegsiga faylka terminal. Waa run in ay tahay habka ugu murugsan, laakiin sidaan sheegnay ayaa ah tan ugu waxtarka badan. Kuma tiirsaneeysid barnaamijyada dhinac-sadexaad ee cuna kheyraadka sidoo kale mar walba waa la isku halleyn karaa. Waxa wanaagsan ayaa ah inaad had iyo jeer heli karto casharro sidan oo kale ah si ay kaaga caawiyaan adeegsiga terminal -ka haddii aadan aqoon hore u lahayn. Markan waxaan kaa caawineynaa inaad ogaato nidaamyada ku jira Mac waxay galayaan internetka.
Marka hore iyo ka hor intaadan waalan raadinta qoraalka si aad u ogaato hababka Mac u adeegsadaan internetka, waa inaad ogaataa laba shay. Midda koowaad, sida loo furo terminal -ka Mac (waxay umuuqataa wax iska cad laakiin dad badan hubaal ma yaqaaniin) iyo tan labaad, ogaanshaha ilaha ku xiran internetka ee Mac -ka waxaa loo adeegsadaa go'aaminta sababta ay mararka qaar u gaabiso iyo ogaanshaha barnaamijyada ka shaqayso asalka. Wax xiiso leh oo waxtar leh si kor loogu qaado awoodda kombiyuutarka.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo loo furi karo terminal -ka:
Guji astaanta Launchpad ee Dock, ku qor Terminal -ka goobta raadinta, ka dibna guji Terminal.
Kujira Raadiyaha, Fur faylka / Codsiyada / Adeegyada, ka dibna laba jeer guji Terminal.
Hadda waa inaan kaliya qor taxanahan:
Riix Enter iyo a liiska hababka isticmaalaya isku xirka internetka. Inta badan, waxa aan liiska ku aragno waa kuwo is-sharraxaya, ama si fudud ayaa loo qiyaasi karaa.
In aad ku raaxaysato iyo waxaan rajaynaynaa inay waxtar kuu leedahay iyo in casharkan yar waxaad ku horumarin kartaa fikradahaaga ku saabsan Mac -kaaga iyo sida uu u shaqeeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Hubi nidaamyada Mac ee internetka ka galaya marinka
Phillipa Soo Oo Ku Biirtay Taxanaha Gabdhaha Ifaya